कसरी ईमेलको एक इन्स्टाग्राम खाता पुन: प्राप्ति गर्न 🥇
कसरी ईमेल बिना एक इंस्टाग्राम खाता पुन: प्राप्ति
सामाजिक नेटवर्कहरू हालका वर्षहरूमा उनीहरूको लोकप्रियतामा वृद्धि भएको छ। यस्तो तरिकाले, कि यो को लागी प्रयोगकर्ता को संख्या मा छ लगातार वृद्धि सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने सामाजिक नेटवर्कहरू मध्ये एक इन्स्टाग्राम हो। प्लेटफर्मले भिडियो र छविहरू प्रकाशन गर्न र विवरण थप गर्ने सम्भावनाको साथ जनसंख्यालाई मोहित गर्यो। यद्यपि, इन्टरफेसको संचालन अनावश्यक देखिन्छ सरल देखिन्छ। वास्तविकता तथ्य यो छ कि यो प्रख्यात नेटवर्क को एक ठूलो संख्या को उपयोगकर्ता संग आफ्नो रहन मजबूत गरीएको छ। यद्यपि, क ठूलो मात्रा व्यक्तिहरूको प्लेटफर्ममा तिनीहरूको पासवर्ड बिर्सिन्छ। तसर्थ, यो थाहा पाउनु आवश्यक छ कि कसरी इमेल बिना एक इन्स्टाग्राम खाता पुनःप्राप्ति गर्ने।
व्यक्तिहरूको दैनिक संख्या केहि डाटा बिर्सनुहोस् वा महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता असंख्य छ। अधिक, जो एक सामाजिक नेटवर्क बाट आफ्नो पासवर्ड बिर्सन आउँछ। इन्स्टाग्राम प्लेटफर्म, निरन्तर देखिएको समस्याको सामना गर्दै, ईमेल बिना इन्स्टाग्राम खाता पुन: प्राप्ति गर्न उपयुक्त संयन्त्रहरूको विकास भएको छ। यस तरिकाले, प्रयोगकर्ताहरूले गर्न सक्छन् पुन: प्रविष्ट गर्नुहोस् अनुप्रयोगमा, यदि उनीहरूले अनुरोधित डाटा याद गरेन भने पनि।
ईन्टरफेसको पहुँच पुन: प्राप्त गर्न परम्परागत संयन्त्र पासवर्ड रिकभर गर्न लिंक गरिएको ईमेल खाताको प्रयोग आवश्यक पर्दछ। यद्यपि धेरै केसहरू छन् जुन प्रयोगकर्ताले आफ्नो ईमेलको पहुँच गुमाएको छ। यो प्रयोग द्वारा, मेल एक्सचेन्ज वा यो बिर्सनु को लागी पनि। यसैले इन्स्टाग्रामले ईमेल बिना इन्स्टाग्राम खाता पुन: प्राप्ति गर्ने अभिनव विकल्प ल्याएको छ।
उसको अघि डाटा घाटा इन्स्टाग्राममा पहुँच, र ईमेल प्रयोगकर्ताहरूले आफ्नो खाता प्लेटफर्ममा पुन: पहुँच गर्न सक्षम हुनुपर्दछ। त्यसकारण को प्रक्रिया अघि जानकारी को घाटा ईन्टरफेसले केहि थप विकल्पहरू सेट गरेको छ। यस तरीकाले, लाई चिन्न व्यक्ति परिचय र पहुँच अनुमति दिनुहोस्।
तपाईलाई पनि चासो लाग्न सक्छ इन्स्टाग्रामको लागि वास्तविक मनपर्दो किन्नुहोस्.
एसएमएस द्वारा एक इंस्टाग्राम खाता पुनर्प्राप्ति
ईमेल बिना इन्स्टाग्राम खाता पुन: प्राप्ति गर्नका लागि एक सुरक्षित विकल्प मध्ये एक हो पाठ सन्देश यसको लागि, प्रयोग गरिने उपकरण एन्ड्रोइड अपरेटिंग प्रणालीमा सम्बन्धित हुनुपर्दछ। देखि, भित्र आईओएस उपकरणहरू यो विकल्प उपलब्ध छैन। थप रूपमा, यो याद गर्नुपर्दछ कि यो विकल्पको प्रयोग गर्न यो प्रयोग गर्न सम्भव हुने छैन वेब प्लेटफार्म ईमेल बिना इन्स्टाग्राम खाता पुन: प्राप्ति गर्न, त्यसैले यो अनुप्रयोगबाट सीधा हुनुपर्दछ।
पहिलो कुरा जुन प्रयोगकर्ताले पक्का गर्नुपर्दछ कि त्यो उसको हो एन्ड्रोइड उपकरण अनुप्रयोगको सबैभन्दा अपडेट गरिएको संस्करण फेला पार्नुहोस्। यो किनभने ईमेल बिना ईन्स्टाग्राम खाता पुन: प्राप्ति गर्न विकल्प, सन्देश पठाएर मात्र उपलब्ध हुन्छ सब भन्दा भर्खरका संस्करणहरू। त्यसो भए, यदि तपाईं विकल्प देख्न सक्नुहुन्न भने, तपाईंले प्लेस्टोरको माध्यमबाट प्लेटफर्म अपडेट गर्नुपर्नेछ, तपाईंको भर्चुअल स्टोर।
के तपाइँ तपाइँको लगइन जानकारी बिर्सनुभयो?
जब एक व्यक्ति को सब भन्दा पछिल्लो संस्करण को पुष्टि भयो इन्स्टाग्राम तपाईंले अनुप्रयोग प्रविष्ट गर्नुपर्नेछ। उहीको मुख्य पृष्ठमा, तपाईंले ट्याबमा क्लिक गर्नुपर्नेछ के तपाइँ तपाइँको लगइन जानकारी बिर्सनुभयो? यस तरीकाले पुनःनिर्देशित गर्न।
पछि, प्रयोगकर्ताले उनीहरूको प्रविष्टि गर्नै पर्दछ उपनाम वा अनुप्रयोगमा नाम। त्यसो भए तपाईले अगाडि बढ्नको लागि "अर्को" ट्याबमा थिच्नु पर्छ। त्यस पछि, विकल्प क्लिक गर्नुहोस् वा क्लिक गर्नुहोस् "एसएमएस पठाउनुहोस्".
सन्देशको संख्यामा पठाइनेछ लिंक गरिएको फोन व्यक्तिगत खातामा। त्यसकारण, प्रयोगकर्ताले निर्देशनहरू पालना गर्नु पर्छ जुन उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि उक्त सन्देशमा देखा पर्दछ। यस तरिकाले तपाईं ईमेल बिना नै एक इन्स्टाग्राम खाता रिकभर गर्न सक्नुहुनेछ कुल सफलता संग।
तपाईलाई पनि चासो लाग्न सक्छ इन्स्टाग्राममा सक्रिय अनुयायीहरू खरीद गर्नुहोस्.
फेसबुकको माध्यमबाट एक इन्स्टाग्राम खाता पुन: प्राप्ति गर्नुहोस्
इन्स्टाग्राम प्लेटफर्म सबैभन्दा ठूलो र सबैभन्दा लोकप्रिय सामाजिक नेटवर्क, फेसबुक द्वारा अधिग्रहण गरिएको छ। यो तथ्य वर्ष 2012 मा घोषणा गरियो; तसर्थ पछि को राशि इन्स्टाग्राम अपडेटहरू यो अधिकतम गरिएको छ। यद्यपि फेसबुकको प्रयोगको माध्यमले नेटवर्क पासवर्ड पुन: भण्डारण गर्नका लागि प्रयोगकर्ताले दुबै खाताहरू लि have्क गर्नु अत्यन्त आवश्यक हुनेछ। अन्यथा, यस विकल्पलाई खाता पुन: प्राप्ति गर्न प्रयोग गर्न सकिँदैन इन्स्टाग्राम ईमेल बिना यो विकल्प अपरेटि systems प्रणालीहरूको लागि उपलब्ध छ। एन्ड्रोइड र आईओएस।
प्रयोगकर्ताले सुरु गर्नुपर्दछ अनुप्रयोग खोल्नुहोस् पहिले तपाईंको मोबाईल उपकरणमा स्थापितमा डाउनलोड गरिएको। पहिलो पहिचान पृष्ठमा भएको कारण, प्रयोगकर्तालाई उसको नाम वा उपनामको लागि सोध्नु पर्छ; साथै उनीहरूको सम्बन्धित पासवर्ड
¿Olvidaste तू contraseña?
लग-इन डाटा हराउने क्रममा व्यक्तिले आफ्नो खातामा पहुँच गर्न नसक्ने भएकोले अर्को उपाय लिनु पर्छ। यो गर्नका लागि प्रयोगकर्ताले ट्याबमा क्लिक गर्नुपर्छ ¿Olvidaste तू contraseña?
फेसबुकको साथ लगईन गर्नुहोस्
लगईन डाटा बिर्सनु मा सहमत भएको पछि, प्रयोगकर्ताले विकल्पको लागि पर्दाको तलतिर हेर्नु पर्छ "फेसबुक संग लगईन"। यस तरीकाले पहुँच प्रक्रिया सुरू गर्नका लागि। प्लेटफर्मले फेसबुक ईन्टरफेस मार्फत तपाईंको पहुँच पुष्टिकरण अनुरोध गर्नु पर्छ। तसर्थ, व्यक्ति पुष्टि गर्नु पर्छ तथ्य यस तरीकाबाट, प्रयोगकर्ताले खाता पुन: प्राप्तिमा सफलता प्राप्त गरेको छ इन्स्टाग्राम ईमेल बिना
कसरी ह्याक गरिएको इन्स्टाग्राम खाता पुन: प्राप्ति गर्ने
ब्लग भ्रमण बढाउनुहोस्